Saba keenyaa fi biyya keenya Roorroo jalaa baasuuf Mootummaa ummataa ijaarrachuu qofaani. | QEERROO
13. Qeerroon, loltoonni, waraanni Oromoo bakka adda addaa fi caasaalee mootumama keessatti argamtan hiree amma argame kanatti fayyadamuun bilisummaa fi haqa Oromoof akka birmattan hubachiisna.
14. Seenaa keessatti sabni bilisummaa isaatiif falmatee milkaa’uu dadhabe hin jiru. Kanneen gabroonfattootaaf lukkee ta’an garuu yeroo ittii milkaa’an hin qaban ykn hin turre.
17, ilmaan Oromoo waraana RIB ,Federaalaa,HAO,poolisii Oromiyaa fi Milishaa keessatti argamtan ammaan booda ergamtuu murna garboomsaa jalaa baatanii qabsoo Bilisummaa Oromoo ABOn durfamutti akka makamtan waamicha keenya isiniif goona.